Tsindry bokotra Welding China Mpanamboatra sy mpamatsy | ZHJ
Ny bokotra bimetal contact dia azo omena amin'ny varitey lehibe fanamafisana sy fitambarana fitaovana, ny akoran'ilay sosona miasa dia mety Ag, AgCdO na AgNi, lafiny Forthe azo ampidinina amin'ny vy vy fanohanana na alim-borona Cu-Ni azo ampiasaina, Ny hatevin'ny sosona miasa ambony dia ao anatin'ny antsasaky ny hatevin'ny sosona ambony.
Ny mampiavaka azy toy izao:
1, ny fifandraisana Tri-metaly dia misy faritra ifandraisany amin'ny fitaovana Fe, miaraka amina convexes kely hampitomboana ny welding. Manampy ny fitoniana fanamafisana ny fifandraisana amin'ny ravina vy sy ny fitaovana vita amin'ny vy tsy misy fangarony sns.
2, Ny toeran'ny welding dia mifamatotra amin'ny metaly miempo. Ny fahamarinan-toeran'ny herinaratra dia tsara lavitra noho ny fifandraisana amin'ny riveting miaraka amin'ny sary tonga lafatra sy ny toerana misy azy, raha riveting, dia mety hanodinkodina ny metaly bi ho very welding koa .Mba hisy fiantraikany amin'ny metatra mari-pana amin'ny fanodinana data.
3, Raha ampitahaina amin'ny Welding Contact dia manana fotoana fohy sy tontolo iainana madio izy io. Azo ampiasaina amin'ny famokarana ampahany kely izy, indrindra ho an'ny rafitra mini.
Ny fifampiresahana Tri-metaly dia mety misafidy metaly volafotsy samihafa amin'ny alàlan'ny vola elektrika samihafa amin'ny fitaovana. Azo ampiasaina amin'ny tetezana mifandraika amin'ny fantsom-panafody herinaratra. Ampiasaina betsaka io ho an'ny faritra fanaovana sy ny tetezana vy bi, toa ny relay, mini-switch, fanaraha-maso mafana, bokotra ary fanapahana fizaran-tany.
Tri-metal Contact product line composes roller automaton, extruder machine, welding machine, auto stamper, sheet contact machine, hydraulic pressure tester, projector, microscope sns .mba milina 100tesing .Mety afaka mamokatra vokatra mifandraika isaky ny famolavolan'ny mpanjifa miaraka amina fivoahana 2 miliara isan-taona fahafahana
AgSnO2, AgSnO2InO3, AgZnO2, AgCu0, AgCd0, sns.
Ampiasaina be amin'ny karazana contactors, relay, mpandika faritra ary switch sns. 3.Mombamomba ny vokatra: Nickle kely no apetraka ao anaty akora Ag mba hahatonga azy ireo hadi-bary Ag, mba hanatsarana ny tanjaka, ny hamafin, ny fanoherana ary ny fanoherana ny fitaovan'ny Ag. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana dia mitazona ny tombony amin'ny fitantanana avo lenta sy ny fanoherana ambany ny Ag madio. Ny rivet mivaingana dia ny karazana fifandraisana izay vita amin'ny alàlan'ny volafotsy na volafotsy.
Previous: Assembly Welding
Manaraka: Torohevitra mifandray amin'ny herinaratra
Silver Metal firaka tariby
Kodiarana volafotsy varahina
CONTACT CONTACT TRANO